Date My Pet » 5 Actionable Tips kukwezva mukadzi Dreams Your
kubudikidza Bill Achola
Unonzwira uchinyara pamberi vakadzi uye haikukwezvi navo?
Unoziva vanotambura pasi chivimbo pamberi pavo?
Pane mashoko akanaka kwamuri. Hausiwe woga anonzwa chete. Sezvo yakakurumbira tsumo
“Vakadzi vakaita mazes, kana uchinzwisisa navo, iwe unzwisise nyika”.
nyaya yangu nevakadzi:
Ini ndagara mumwe wevaya lanky uye vasingadiwi vakomana vose pamwe angu makore chesekondari. Handina kuziva zvokutaura kana zvokuita kuva nomukurumbira nevakadzi.
Mubvunzo chete kuti nguva dzose haunted neni akanga sei kukwezva vakadzi? Zvose shamwari yakandipoteredza akanga dzechisikana apo ndaisazombogona kuita kutanga kubvunza musikana panze.
Pakutanga Ini akatambura kutya kurambwa. Ndakazoudzwa kuti vakawanda vasikana yakandipoteredza vakanga vatova kuroorana uye nokudaro ndakanga zvaungasarudza.
Izvi zvakaramba zvichiitika kwenguva yakati kusvikira mukoma wangu mukuru akandipa mazano mashoma. Ini rakavatevera uye pakarepo akawana mukurumbira pakati vasikana.
nhasi, Ndine mudzimai uye wafambidzana vakadzi siyana. Zvakaitika wangu nevakadzi kubata makandiumba mududziri unyanzvi yokukwezva vakadzi. Vamwe Mazano aya anogona kukubatsira panyaya iyi ndivo anotevera.
1. Iva nechivimbo:
Confident inotorerwa anofarirawo uye kukosheswa nevakadzi. Unofanira kufamba zvekare mukadzi mumwe nomumwe ane chivimbo mafungire.
A tariro Nhaurirano hunoratidza kuti iwe chirwere hadzikoshi zvakaoma chakakura Dzima vakadzi.
Women savanhu vanogona kuvimba. saka, edzai nechokwadi chokuti vakadzi kuziva kuti muri simba uye kuvimbwa. A zvishoma kuzvida rumbidzo kunogonawo kubatsira kukwezva vakadzi.
2. Kuzadzikisa vakadzi:
Women zvachose rudo compliments. It zvimwe ndiyo yakanakisisa uye akaedza nevakawanda nzira kukwezva vakadzi.
Unogona kurumbidza kwake munzira iye anotarira, munzira iye anofamba, hurukuro, madhirezi kana kunyemwerera. nyonyova, chinhu ukarumbidza nezvebasa aizoita afare.
A yakawanda vakadzi zvachose kuda compliments pamusoro runako rwomukati. Saka unogona ingoedza complimenting vakadzi vavo nyoro uye rudo hunhu, mwoyo hanya nezvimwe zvinhu zvakadaro uye pakarepo kuwana pfungwa dzavo.
3. Iva muteereri akanaka:
Mumwe musiyano inokosha pakati varume nevakadzi ndiko, kana varume nezvomumwe dambudziko, Ivo kutarisira kuti akwire aine Zvingangokubatsirai.
zvisinei, kana vakadzi nezvomumwe dambudziko, vanongoda kuti kuteerera dambudziko uye ugumbuke naye.
Vakadzi vane zvishoma kana vasingafariri chokuita matambudziko. Nokudaro, unogona kukwezva navo zvikuru chete kuva muteereri akanaka uye zvokukweretesa nzeve dzenyu nezvose zvavanazvo kutaura. Izvi zvichaita kuti vave kufunga kuti iwe rudo zvechokwadi uye hanya navo.
4. Kuvapa zvipo:
Zvipo kuti vakadzi vakawanda vanofara. Mumwe vakawanda mhinduro kwakakosha mubvunzo sei kukwezva vakadzi kuvapa zvipo ose zvichibvira nguva nenguva. Maererano vakadzi, mukana sezvo nyore sezvo kutanga nokubata inoda iitwe.
saka, muri zano kuchengeta dhayari nekukuyeudzirai misi nokuda ruduku zviitiko. Ipai vakadzi zvipo kupemberera vhiki kana pamwedzi okupemberera zviitiko kukwezva navo pakarepo.
5. Iva chivalrous:
Chivalry inotorerwa nokukosheswa nevakadzi zvose pamusoro. Iva nechokwadi chokuti iwe urege kukanganwa zvishoma mashoko chivalry kwakafanana nokuvhura musuo motokari yaro kana kumirira kusvikira iye agere resitorendi kukwezva naye. Usamborega vanodanidzira kwaari kana mumwe mukadzi ari kwake pamberi. Izvi zvichakubatsira kuti simba kwazvo mupfungwa mukadzi zvaunoda Woo.
Imwe yokugumisa pfungwa sei kukwezva vakadzi kuti avaratidze divi rako mupfungwa. Vakadzi vade simba uye emotionless vanhu ingano.
Mukadzi wose anoda munhu vachachema pafudzi rake. saka, pose pazvinobvira, amuratidze divi rako mupfungwa.
Mutorei kudanana mafirimu, Mwenje chiedza kunodya zvinenge. Ndakaedza zvose izvi uye vakawana misi zhinji zvose zvazvo upenyu hwangu.
zvisinei, nzira kukwevera uye yokukwezva nevakadzi anosiyana pamunhu mukadzi vamwe. Specification Yakafanira aizondibatsira ikutungamirire nani panyaya iyi saka sununguka kubvunza mimwe mibvunzo.
kusvika panguva iyoyo, Best weMhanza!